Archive du 20180428
Hetsiky ny depiote Hanomboka hamoaka mpiasan’ny ministera
Mandeha hatrany ny fandotoana ny hetsi-pitolomana tarihin’ny depioten’ny fanovana eny amin’ny Kianja 13 mey amin’izao fotoana izao, indrindra taorian’ny fanambaran’ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana tany Mahajanga.
Force Mixte Médiane Miantso ny rehetra hifandinika aminy
Efa toa zary lasa fampihavanana sadasada ny tian-kambara etoana. Amin`izao fotoana mivaivay ny itafatafana ary fitenin`ny fiaraha-monina no ifanakalozana.
Krizy politika Fifampiresahana ihany no vahaolana, hoy ny MFM
Tokony mifampiresaka ireo depiote rehetra voafidim-bahoaka satria izy ireo no voafidim-bahoaka hampanjaka ny demokrasia, hoy ny fanehoan-kevitry ny antoko MFM tamin’ny alalan’ny filohany Mandafy Rakotonirina omaly.
Fanelanelanan’ny vahiny Mila fahamailoana
Efa tafiditra ao anaty krizy politika tanteraka isika amin’izao fotoana izao, na tsy mbola tena miantraika be amin’ny fiainana ara-tsosialy sy toekarena aza izy io, saingy efa manomboka ho mena ny tondro rehetra.
Rajaonarimampianina tany Faratsiho Ny ankizy no navoaka hanohana azy
Nahita ny tsy fahita ny filoha tany Toamasina tamin’ny alahady 22 aprily satria nitondran’ny olona sorabaventy, ka voatery nandeha angidim-by mihitsy.
Mpiasan’ny minisiteran’ny tanora Manohana ny tolon’ny depioten’ny fanovana
Efa ela izahay no nitabataba fa marary ny teknisianin’ny minisiteran’ny tanora sy ny fanatanjahantena eto Madagasikara, hoy ny filohan’ny sendikan’ireo mpiasa, Cyriaque Simon, raha niomana niaraka tamin’ireo mpiara-miasa taminy tetsy amin’ny minisitera etsy Ambohijatovo hidina hitolona ho eny Analakely omaly.
Ben’ny tanànan’Analamanga Tsy misy mahazo maneho hevitra amin’ny anaran’ny fikambanana
Manoloana ny zava-misy iainan’ny firenena ankehitriny dia nanapa-kevitra ny fikambanan’ireo ben’ny tanàna eto Analamanga,
Hifandamina sa hifamely ?
Miarahaba Jean a, ahoana ny fandehany e..ohatry ny tsy dia tazatazana firy intsony eto amin’ny ville ianareo a..mamay be angaha ao an-dapa ao ry jean ka mba mamoron-dia maka rivotra kely.
Mampitandrina ny SMM “Tsy natao hiaro fitondrana ny fitsarana”
Namoaka fanambarana ny avy amin’ny Sendikan’ny Mpitsara eto Madagasikara na ny SMM omaly 27 aprily.
Sendikan’ny mpiasa Malagasy Hitaky karama mahavelona
Hanetriketrika ny fankalazana ny fetin’ny asa etsy amin’ny Parvis Analakely ny 1 mey izao, hoy ry zareo avy eo anivon’ny randrambao sendikalin’ny mpiasa malagasy na ny CTM – SSM tetsy amin’ny Grand melisse Tsaralalana omaly.
Fiaraha-miasan’ny FLM sy ny CNaPS Synoda faha-11 nahazo fiofanana i Sofia
Synoda FLM (Fiangonana Loterana Malagasy) miisa 11 hatreto no voahofan’ny CNaPS mikasika ny fiahiana ara-tsosialy ka mpiasam-piangonana sy mpanao raharaha miisa 3 000 no nahazo tombotsoa tamin’izany.
Tanora sy olom-pirenena saro-piaro amin’ny tanindrazany “Aoka tsy atao fitaovana politika ny tanora”
Namoaka fanambarana ihany omaly ireo tanora marobe mivondrona anaty fikambanana maro samihafa eto amintsika notronin’ireo olom-pirenena saro-piaro amin’ny tanindrazany. Anisan’ireny ny Yali Madagascar, ny Green and Kool…
Fanokafana kaonty eny amin’ny banky Vao ny 5 %-n’ny Malagasy no manao azy
Mbola tena ambany dia ambany tokoa ny tahan’ireo olona manokatra kaonty eny anivon’ireo banky maro samihafa eto amintsika ankehitriny. Hatramin’izao mantsy dia tsy misy afa-tsy 5 % izany, miaraka amin’ireo orinasa lehibe sy ireo mpiasam-panjakana efa manana kaonty.
Mahajanga Ambohipihaonan’ny sekoly FJKM
Nanomboka omaly ary hifanarana rahampitso alahady 29 aprily ny andron’ny sekoly FJKM tanterahina any Mahajanga. Fanompoam-pivavahana lehibe tao amin’ny Complexe Sportif Ampisikina Sekoly FJKM 605 manerana ny nosy, sahanin’ny mpampianatra 4200 no mandray anjara amin’izy io.
Kintan’ny Fanatanjahantena Malagasy Rabe Samuel Jean Jacques René na i Néné kely Niantoka ny fiainako manontolo ny baolina kitra
Hiverina kely eo amin’ny tontolon’ny baolina kitra indray ny eto amin’ny pejin’ny Kintan’ny Fanatanjahantena Malagasy amin’ity sabotsy 28 aprily ity ka hampahafantatra fohifohy tamin’ny resaka nifanaovana taminy an-dRabe Samuel Jean Jacques René na i Néné kely na Ramaître koa ho an’ny mpifanerasera aminy, lohalarana kalaza teo amin’ny fanaovana “ciseau” rehefa mamono baolina”.
Championnat National N1B Hommes 2018 Anio hariva ny lanonam-panokafana
Hanomboka anio sabotsy marainan’ny 28 aprily etsy Mahamasina ny fiadiana ny ho tompondakan’i Madagasikara taranja basikety baolina sokajy N 1 B lehilahy.
Feno herinandro anio sabotsy sahady ny tolona nentin’ireo depioten’ny fanovana tontosaina etsy Analakely. Nosalorana ny anarana hoe « Fihaonambe » moa ity hetsika anio ity.
Fahapotehan’ny sehatra fanabeazana Mila mandray andraikitra ny tsirairay
Nisy ny adihevitra an-databatra boribory omaly zoma 27 aprily tetsy amin’ny Hotely Colbert Antaninarenina noho ny hetsika herinandro maneran-tany ho an’ny fanabeazana.
Madagasikara Songonan’ireo firenena Afrikanina hatrany
Raha aty Afrika no jerena dia anisan’ny firenena tena mbola milamina i Madagasikara na dia mandalo krizy matetika aza. Saika nisy hatrany ny ra latsaka tamin’ireny tolom-bahoaka niseho rehetra ireny.
Alika nanaikitr’olona teny Ankadilalampotsy Niakatra eny amin’ny zandary ny raharaha
Ramatoa iray no voakaikitry ny alika ka naratra mafy omaly teny Ankadilalampotsy teo amina toerana manakaiky Fiangonana iray. Teny an-dalana no fantatra voakaikitra ity ramatoa ity raha ny fitantaran’ireo nanatri-maso ary tena nipetaka mafy mihitsy ilay alika izay hita ho lehibe sy matanjaka tokoa.
Fikambanana Vahoaka Ihany “ Mendrika ny fitakian’ ireo depiote ho an’ ny Fanovana ”
Mandray anjara mavitrika amin’ ny tolona izay atao etsy amin’ ny Parvis ny Lapan’ ny Tanàna Analakely ny fikambanana Vahoaka Ihany. Fikambanana izay niforona ny taona 2013 ary misehatra eo amin’ny sosialim-bahoaka,raha ny fanazavana, ka niezaka nanampy ireo mahantra sy voatsindry hazolena.